Uhlalutyo lwesandi senqaba yamandla eSistem iMultiroom WiFi | Iindaba zeGajethi
UMiguel Gaton | | Umfanekiso kunye nesandi, Reviews
Uphawu lwamandla eSpanish iSpem aluyeki ukusimangalisa ngeemveliso eziya zisiba yimpumelelo, sinika itekhnoloji, uyilo kunye nokusebenza kakuhle ngaphandle kokuwohlwaya ngokugqithileyo kwixabiso lentengo. Ke ngoko, iinkqubo Amandla eSistem iMultiroom Kubonakala ngathi lukhetho olunomdla lokuthathela ingqalelo isandi sendlu yethu. KwiActualidad Gadget sibe nethuba lokuhlalutya le mveliso ngokunzulu, ke masibazi ngakumbi.
1 Yintoni i-Energy Sistem Multiroom?
2 Iinqaba ezinamandla zesandi
3 Ukuvavanya iinqaba
4 Malunga nesicelo seWi-Fi yamandla
Yintoni i-Energy Sistem Multiroom?
Kulabo abangayaziyo, iMultiroom sisakhono sezixhobo ze-Energy Sistem zokungqamana kunye nokudlala umculo kwiindawo ezahlukeneyo zendlu, ngokungathi "ngumculo wombhobho" wakudala. Kodwa ngaphandle kwamacingo ngaphandle kwengcingo, ngeWiFi okanye ngeBluetooth. Oko kukuthi, siphinda sivelise isandi esivela kwi-Smartphone okanye kwiThebhulethi nakwizixhobo ze-Energy Sistem Multiroom Ngqamanisa ngenethiwekhi yeWiFi ukuvakala ngazwi linye. Ukulawula isithethi ngasinye (ukuba uneenqaba ezininzi kunye / okanye esinye isixhobo sophawu) singasebenzisa Inkqubo yeWi-Fi yamandla, efumaneka simahla kwiVenkile yokuDlala okanye kwiVenkile yeApp. Kukho amathuba amaninzi: eyona ilula kukudibanisa umdlali kunye nesixhobo ngasinye ngeBluetooth nganye. Eyona iphambili kukusebenzisa usetyenziso kwiselfowuni kunye nethebhulethi yakho ukulawula ngokuzimeleyo umthamo wesithethi ngasinye esidibeneyo, ungqamanisa nabo, njl. Ewe unokusebenzisa i-USB okanye umfundi wekhadi le-SD kwaye usebenzise inqaba ngolawulo lwayo olukude.
Ukukhuphela usetyenziso kwi-Android yakho / kwi-iOS usebenzisa amakhonkco alandelayo:
Amandla eMandla e-WiFiMahala
Iinqaba ezinamandla zesandi
Ngeli xesha sivavanye ipakethi equka iiNqaba ezimbini zesandi zeMandla eMultiroom Tower Wi-Fi. Inqaba nganye yenziwe ngee-4 two (10 + 10W) ​​zangaphambili ze-woofers, i-1,5 ″ (10W) i-tweeter kunye ne-4 ″ (30W) i-subwoofer. Lilonke badibanisa ukuya kumfanekiso ongacingelekiyo we I-60W RMS kwinqaba nganye.
Inqaba ngokwayo ayilinganisi ngaphantsi kwemitha ukuphakama, ububanzi nobunzulu be-15 cm. Inkangeleko yemveliso incinci kwaye iyathandeka, uyilo oluhle lwe-vinyl olugqityiweyo yiphaneli yokuthinta ebuyileyo eyongeza umnxeba wale mihla. Inqaba ibandakanya isiseko esincinci sokonyusa uzinzo kwiseti, ukuba ucinga ukuba usengozini yokuwa (umzekelo ukuba sinabantwana, izilwanyana zasekhaya okanye sithambekele ekukhubekeni ifanitshala ekhaya).
Nje ukuba iinqaba zidityaniswe, sifumana ilizwi-elingaphezulu elibonisa imowudi ekhethiweyo (iBluetooth, iWiFi, iSD, iUSB, njl. Ngokoluvo lwam lo msebenzi awunyanzelekanga kuba sawubona kwiscreen esiphezulu, usetyenziso okanye irimothi. Inqaba inendawo enikwe indawo ephezulu kunye neslot apho sinakho gcina iselfowuni okanye isidlali ngelixa usibiza, kunye neziseko ezibini ze-2-amp USB, umbono olusebenzayo nolwamkelekileyo. Ungqamaniso lweWiFi lwenziwa ngaphandle kweengxaki, kuba ukuphatha kulula kakhulu. Inkqubo ye- umgangatho wesandi ubonakala uphumelele kakhulu, kunye nokukhetha ukukhetha ulungelelwaniso olugciniweyo okanye ukulawula ibhalansi yokuhamba kunye neebhasi ngamavili amabini obomi abekwe ngasemva. Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-subwoofer, nangona ubukhulu bayo buncinci, yongeza umzimba kunye nobunzulu kwisandi, ingaphezulu kokwaneleyo ukuba abamelwane basikhumbule ukuba siyisebenzisa ngamandla apheleleyo.
Iphaneli yokuchukumisa ephezulu ine ukuchukumisa okunzima, kodwa yinto eqhelekileyo ukusukela kule mihla sele siqhele ubuntununtunu obugqithisileyo bezikrini zokuchukumisa ii-Smartphones zethu, ukuya kwinqanaba lokuba ucofe naluphi na olunye ulawulo kunokubonakala kungaqhelekanga. Njengoko besenditshilo ngaphambili, uyilo lwalo luhle kwaye isibane esingasemva esinexesha songeza "ukuchukumisa".
Umgangatho wokudlala kwakhona kwimidiya ebonakalayo (i-USB, ikhadi, okanye uqhagamshelo lwentambo) ayixhasi uncamathiselo. Ngemisebenzi engenazingcingo (iBluetooth okanye iWiFi), njengoko unokulindela I-WiFi isebenza ngcono. Ngale nethiwekhi, ukusikwa okuncinci okanye ukusilela kokungqamanisa akunakufane kwenzeke, ingxaki ethile ethi kuyo nayiphi na imeko ihlale kumawaka wesibini kwaye inokuthathwa njengeqhelekileyo kolu hlobo lwemveliso.
Malunga nesicelo seWi-Fi yamandla
Ukuba sifuna izixhobo zidibane kwaye zinxibelelane, kufuneka sikwenze oko faka usetyenziso lweWi-Fi yamandla. Ndiyabulela kule sicelo ungaqhuba lonke ulawulo, uphonononge iifayile zomdlali onxulumene noko, unxibelelwano neTuneln, Spotify, njl.
Amandla eSistem iMultiroom WiFi
Ungqamaniso lwezixhobo ezininzi
Uyilo oluthile lomhla
Inkulu kakhulu ngobukhulu
Umgangatho owandayo weemveliso ze-Enegy Sistem awunakwa. Le yimveliso enomgangatho onesandi esifanelekileyo, uyilo oluthandekayo, ukusebenza kweWiFi kunye nexabiso eliphantsi le- € 130 kwinqaba nganye. Ungazithenga ukungena apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo lwesandi senqaba yamandla eSistem iMultiroom WiFi
Kuyaphambuka kwaye kubi ayisiyo-Vifa Stockholm ke ayizukuvakala ilungile.
Eyona headphone yezemidlalo ilungileyo yonyaka